အကဖြင့်ကြမ်းပြင်ရှိ P2.9mm ၃.၉ မီလီမီတာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောအပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုသောဗီဒီယို display panel screen မ်ား - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
ဈေးဝယ်စင်တာများတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့် LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်စျေးဝယ်စင်တာများကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလူအများစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်, အထူးသဖြင့်ကလေးများ
ကခုန်ကြမ်းခင်းကို ဦး ဆောင်သည့်ဗီဒီယိုပြသခြင်းပြား
Dance floor LED ဖန်သားပြင်များကိုနေရာများစွာတွင်အမြဲတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်. ဈေးဝယ်စင်တာများတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့် LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်စျေးဝယ်စင်တာများကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလူအများစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်, အထူးသဖြင့်ကလေးများ; ၎င်းကို 4S auto ဆိုင်များသို့မဟုတ် auto show များတွင်လည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်; ၎င်းကို nightclubs နှင့် KTV ကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေရေးနေရာများတွင်လည်းတပ်ဆင်နိုင်သည် , ဖျော်ဖြေရေးတိုးမြှင့်. . . တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အကအခုန် LED ဖန်သားပြင်များကိုလည်းငှားရမ်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောဇာတ်စင်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်, မော်ဒယ် catwalk, အော်တိုပြ, မင်္ဂလာဆောင်. . .
ကျွန်ုပ်တို့၏ကကြမ်းခင်း LED ဖန်သားပြင်များသည် PC mask ကိုအစားထိုးရန် LOB ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်, display ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားအောင်. ပြီးတော့ဒါကြောင့်ပဲ, ၁.၂ မီလီမီတာမှ ၁၀ မီလီမီတာအထိရွေးချယ်ရန် pixel ကွင်းများစွာရှိသည်. ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ကိုခံရန်သေတ္တာသွန်းသောလူမီနီယမ်သေတ္တာအစားသံပုံးကိုအသုံးပြုသည်.
ကြာရှည်ခံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်, တိကျသောနှင့်သိပ္ပံနည်းကျထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပါစေ, နှင့်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီတင်းကြပ်စွာအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးပါ, ဖောက်သည်များထံသို့ချို့ယွင်းချက်ရှိသောမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုခွင့်မပြုပါ.
ယေဘူယျအားဖြင့်, အကအခုန် LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေပါသည်, သာခြေထောက်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်, ငါတို့ပေးလိမ့်မည်. အချို့သောအထူးတပ်ဆင်၌တည်၏, ကွင်းခတ်လိုအပ်နိုင်ပါသည်, ဖောက်သည်ဒေသအလိုက်ကွင်းခတ်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များလိုအပ်ပါကကွင်းကွင်းများကိုလည်းပေးနိုင်သည်.
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ကခုန်ကြမ်းပြင် P2.9 ၏ဗီဒီယို display panel တွေကို ဦး ဆောင်
SQM နှုန်း pixel
module resolution ကို
P4.81 Led video dance floor floor panel tile board Led video screen
P3.91 ပြင်ပရေစိုခံနိုင်သည့်ကြမ်းခင်းကခုန်။ မျက်နှာပြင်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်မျက်နှာပြင်ပြမှုနှုန်းမြင့်လန်းဆန်းမှုနှုန်း
P3.9 အကပါတီကြမ်းပြင်ပါတီအားငှားရမ်းခြင်းပြင်ပ LED Cube DJ Booth LED မျက်နှာပြင်
မိုးလုံလေလုံငှားရမ်း P4.81 အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော 3D အကအခုန်ကြမ်းခင်းကြွေပြား LED
ဦး ဆောင်ကခုန်ကြမ်းပြင်အပြန်အလှန်ဗီဒီယိုကြော်ငြာ led display ကိုမျက်နှာပြင်
ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်အကအခုန် ဦး ဆောင် Matrix display ကိုအပြန်အလှန်ရေဒါစနစ်ကဗီဒီယိုနံရံ